Filecoin: ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဗဟိုမှသိုလှောင်စနစ် Linux မှ
El ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ပိုမိုမြင့်မားသောအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်းတို့သည်အစ်မနည်းပညာများဖြင့်ဖြစ်သည် ဘလောက် နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္Financeာရေး (DeFi).
အဘယ်ကြောင့်ယနေ့အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆက်စပ်ဆက်စပ်လျှောက်လွှာစူးစမ်းပါလိမ့်မယ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်, Blockchain နှင့် DeFi၏လယ်ပြင်ကနေ သိုလှောင်စနစ်များကိုခေါ် "Filecoin".
IPFS - အဆင့်မြင့်ဖိုင်စနစ် P2P နှင့် Blockchain နည်းပညာ
သို့သျောလညျးအခွားသောအခါသမယတှငျကြှနျုပျတို့အကြောင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့ကြသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးစာတိုပေးပို့စနစ်များကိုဖွင့်ပါပိုမိုလုံခြုံပြီးထိရောက်မှုရှိသောလုပ်ကွက်များနှင့်ငွေကြေးကဲ့သို့သောငွေကြေးသုံးစွဲမှုဖြစ်နိုင်ချေများကဲ့သို့သော "Adamant, Juggernaut, Sphinx နှင့် Status".
ဒါ့အပြင်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးမီ "Filecoin"မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာဖော်ပြပါ application သို့မဟုတ် open source technology သည်ဘလော့တွင်ယခင်ကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သောအခြား application တစ်ခုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည် «IPFS»။ ထိုအရာအပေါ်, အချိန်မီကျနော်တို့အောက်ပါဖော်ပြ:
"... IPFS သည်လက်ရှိ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Cloud တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် IPFS သည်ဗဟိုဆာဗာများအပေါ် အခြေခံ၍ အင်တာနက်၏လက်ရှိလည်ပတ်မှုကို P2P Technology and Blockchain အောက်တွင်အပြည့်အဝဖြန့်ဝေထားသောဝက်ဘ်သို့အသွင်ပြောင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဖြန့်ဝေထားသောဖိုင်စနစ်ဖြစ်ရန်ဖိုင်တွဲများနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဆက်သွယ်နိုင်သည့်လမ်းညွှန်များနှင့်ဖိုင်များပါ ၀ င်သည်။" IPFS: Interplanetary File System ကို GNU / Linux တွင်မည်သို့သုံးရမည်နည်း။
ထိုအလျှောက်လွှာသို့ delving စိတ်ဝင်စားသောသူတို့အဘို့ "Adamant, Juggernaut, Sphinx နှင့် Status"အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသောထိုခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏လာမည့် entry ကိုနှိပ်ပါ။
1 Filecoin: Blockchain-based ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသိုလှောင်မှုစနစ်
1.1 Filecoin ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 Filecoin ဆိုတာဘာလဲ?
1.3 အဘယ်ကြောင့် Filecoin အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်?
Filecoin: Blockchain-based ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသိုလှောင်မှုစနစ်
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် de la "Filecoin ဖောင်ဒေးရှင်း"ဘယ်သူလဲ လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်း ထောက်ပံ့ဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထား "Filecoin"ဒီ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နည်းပညာသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာ ၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
ဖိုင်များသိမ်းဆည်းထားသည့်သက်တူရွယ်တူကွန်ယက်တစ်ခုသည်ဘဏ္filesာရေးဆိုင်ရာမက်လုံးများဖြင့်ဖိုင်များကိုအချိန်နှင့်အမျှယုံကြည်စိတ်ချစွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ Filecoin ၏မစ်ရှင်သည်လူသား၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသော၊ Filecoin ဆိုတာဘာလဲ။
ထို့အပြင်ပိုမိုအသေးစိတ်နှင့်ရှင်းလင်းသောအသုံးအနှုန်းများအတွက်နှင့်အကောင့်ထဲသို့ဆက်ဆံရေးကိုယူပြီး "Filecoin" နှင့် "IPFS" အောက်ပါတို့ကိုထည့်နိုင်သည်
""Filecoin" နှင့် "IPFS" ၄ င်းတို့သည် Protocol Labs မှဖန်တီးထားသည့်သီးခြားနှင့်အပြန်အလှန်ဖြည့်စွက်ထားသော protocol နှစ်ခုဖြစ်သည်။ IPFS သည်ရွယ်တူချင်းများအားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်၊ တောင်းခံရန်နှင့်လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုပြီး Filecoin သည်အမြဲတမ်းဒေတာသိုလှောင်မှုစနစ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Filecoin ၏မက်လုံးဖွဲ့စည်းပုံအရဖောက်သည်များသည်ဒေတာများကိုသတ်မှတ်ထားသောမလိုအပ်သောပမာဏနှင့်သိုလှောင်ရန်ငွေပေးရသည်။ မိုင်းလုပ်သားများသည်ဒေတာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်၎င်းအားစာဝှက်ဖြင့်သရုပ်ပြခြင်းအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ဆုချခြင်းခံရသည်။
“ IPFS သည်အကြောင်းအရာများကိုညွှန်ကြားပြီးလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Filecoin သည်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်တည်မြဲရန်မက်လုံးပေးသည့်အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားနိုင်သည် - သင်တစ်ခြားကိုမပါဘဲသုံးနိုင်သည်။ IPFS သည် IPFS Cluster ကဲ့သို့ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်စည်းရုံးခြင်း (သို့) ရူပဗေဒဆိုင်ရာဆက်လက်တည်ရှိမှုပုံစံများကိုထောက်ပံ့ပြီးဖြစ်သည်။ IPFS နှင့် Filecoin အကြားကိုက်ညီမှုသည်တတ်နိုင်သမျှချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ " IPFS နှင့် Filecoin အကြားဆက်နွယ်မှုကဘာလဲ။
ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက, "Filecoin" တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းမှတပါး ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းဒါကြောင့်လည်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Blockchain နှင့် DeFi စီမံကိန်းအောက်ပါလက္ခဏာရှိသည်။
၎င်းသည် protocol နှင့် token တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ blockchain သည် Proof-of-Spacetime or PoST ဟုခေါ်သောစမ်းသပ်မှုအသစ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုနေရာတွင်အချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ထားသည့်မိုင်းလုပ်သားများမှပြုလုပ်သည်။ Filecoin protocol သည် data သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသီးခြားညှိနှိုင်းရေးမှူးတစ်ခုတည်းပေါ်တွင်မမှီခိုဘဲသီးခြားလွတ်လပ်သောသိုလှောင်မှုပံ့ပိုးသူများကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ပေးသည်။ သိုလှောင်ခြင်းအားဖြင့်မိုင်းလုပ်သားများသည်သိုလှောင်ခြင်းအားဖြင့်တိုကင်များရရှိသည်။ Filecoin ဆိုတာဘာလဲ။
အဘယ်ကြောင့် Filecoin အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်?
"Filecoin" como ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဖြေရှင်းချက်စီးပွားဖြစ်၊ တံခါးပိတ်နှင့်စီးပွားဖြစ်ဖြေရှင်းမှုများအပေါ်တွင်မမူတည်ပါ Dropbox y mega ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux Distros ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသော Operating Systems အကြောင်းပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ "Filecoin" una ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသိုလှောင်မှုကွန်ယက်ကို အခြေခံပြီး Cadena က de Bloques, ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်း, disk ကိုသိုလှောင်နေရာ (cloud) နိုင်ပါသည်။
နှင့်အကျိုးဆက်လူ အပ်နှံသိုလှောင်မှု သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်နှင့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအရေးကြီးသောဒေတာ။ သတင်းအချက်အလက်သည်ဝဘ်ပေါ်တွင်သာတည်ရှိပြီးဖြန့်ဝေ။ မတူညီသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာများ.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက "Filecoin" မင်းဆီကိုလည်ပတ်နိုင်တယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သူ GitHub အပေါ်က်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ်လာမည့် တရားမဝင် link ကို အဲ့ဒီအကြောင်း။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Filecoin», ဘာလဲ Blockchain အပေါ်အခြေခံပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောသိုလှောင်မှုစနစ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်အတွေးအခေါ်အကြားပေါင်းစည်းခြင်း၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် အပေါင်း နည်းပညာ Blockchain နှင့် DeFi နည်းပညာလမ်းကြောင်းငါတို့အရင်၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Filecoin: ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသိုလှောင်မှုစနစ်
Google က Android audio codec ဖြစ်သော Lyra အတွက် source code ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်